Amathiphu Okuthola Umsebenzi Wokulima
Ngokuvamile abantu abasha abafuna ukuqala ukulima baqala njengabafundi noma abafundela emapulazini ezentengiselwano. I-Future Farmers Foundation yinhlangano ebuza imibuzo futhi ibeka abafakizicelo emapulazini ukuze bathole ulwazi olusebenzayo ekulimeni. Uma sebeqedile ukuqeqeshwa kwabo eNingizimu Afrika, iningi labafundi baqhubeka nokuqedela ukuqeqeshelwa ukuqeqeshwa kwezilimo zomhlaba jikelele. Umsunguli, uJudy Stuart nabanye 'abalimi abazayo' abaqedile ama-internship bahlanganyela ngamanye amathiphu ukuqinisekisa ukuxoxisana okuhle.
Amafoni akangeni ndawo ekuxoxweni komsebenzi. Vala noma ushiye ekhaya. Ukuphendula ifoni ngenkathi kuxoxwa kungenhlonipho nemikhuba emibi. Uma ufuna umsebenzi udinga ukufika masinyane, udale umbono omuhle futhi ubonise inhlonipho.
Bukeka Ugqoke Kahle
Geza futhi uqinisekise ukuthi uzwa iphunga elihle. Gqoka ngokuhlakanipha. Ungagqoki izibuko. Kubantu, ukuboniswa ngokubhoboza kanye nezindlovu zezinwele ezithandekayo ngeke kusize uma ulandela umsebenzi wokulima.
Ungaba nokwesaba ngesikhathi sokuxoxisana kodwa zama ukumomotheka. Kuzokwenza umqondo omuhle. Kuhle ukusebenzisana nabantu abajabulayo - bavuselela wonke umuntu abazungezile futhi benze umsebenzi ube mnandi. Zama ukuxhaphaza ngesandla - qiniseka ukuthi iqine. Lokhu kudlulisela umuzwa wokuzethemba, noma ngabe awukho.
Uma uhlala phansi, hlala uqonde. Uma ugoqa noma ulayishe phansi esihlalweni sakho, kungase kubonakale sengathi unesizungu noma ungathandeki. Kuyasiza ukuncika phambili futhi uthintane naso nomuntu oxoxa nawe.
Uma uxoxwa, uzobuzwa imibuzo, okudingayo ukuphendula. Kodwa kufanele ubuze imibuzo futhi. Yenza ucwaningo mayelana nepulazi kanye nesimo osifakelayo. Uma wazi ngokwengeziwe epulazini nangomngxoxo, kungcono. Ungabuza imibuzo mayelana nepulazi; lokhu kuzobonisa ukuthi unesithakazelo futhi unolwazi oluthe xaxa. Uma unesithakazelo ngokwengeziwe mayelana nepulazi lakhe, lapho ethanda kakhulu ukuthi uzoba kuwe, ozobhalwa. Uzofunda kabanzi ngomsebenzi bese uthola ukuthi yilokho ofuna ukukwenza. Lapho lolu daba seluphelile, bonisa ukubonga kwakho futhi ubonge umkhulumeli wakho ngesikhathi sakhe.